Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caribbean » Dalxiiska Caribbean ee 2021: Gut Feed
Wararka Antigua & Barbuda • Wararka Aruba • Bahamas Breaking News • Barbados News Breaking • Belize Breaking News • Jebinta Wararka Caalamka • British Virgin Islands (BVI) War jebin ah • Caribbean • Wararka Cayman Islands • saaciday inay • Wararka Dominika • Wararka Dominican Republic • France Breaking News • Wararka Grenada • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • Saint Kitts iyo Nevis Breaking News • Wararka Saint Lucia • Saint Vincent iyo Grenadines Breaking News • Daalacanayo Hadda • Turks iyo Caicos Breaking News • US Virgin Islands Breaking News • Wararka kala duwan
Dalalka ugu badan ee ku tiirsan dalxiiska adduunka waxaa ka mid ah Aruba, Antigua, Barbuda, Bahamas, St. Lucia, Dominica, Grenada, Barbados, St. Vincent, iyo Grenadines, St. Kitts iyo Nevis, Jamaica, Belize, Jasiiradaha Cayman , iyo Jamhuuriyadda Dominican (iadb.org). Jasiiradahaas, quruumaha dalxiisku waa halbowlaha noloshooda waana la kala diray habeenkii.
Markii ay COVID ku korisay madaxiisii ​​foosha xumaa maraakiibta dalxiiska, maamulku wuxuu ku seexday gaariga.
Arrimaha dalxiiska, ee la xarriiqi lahaa waxna laga qaban lahaa marxaladihiisii ​​hore ayaa loo oggolaaday inay koraan oo ay weeraraan meeraha oo dhan.
Ilaa iyo maanta, safarka dalxiiska iyo howl wadeenada dalxiiska, howlwadeenada dowlada, iyo saraakiisha la soo doorto badiyaa wey diidaan inay qaadaan masuuliyada dayacooda
Qaar badan oo ka mid ah kuwa mas'uulka ka ah maraakiibta dalxiiska ama dalxiiska ayaan waligood raalli gelin ka bixin tixgelin la'aanta xaqiiqooyinka iyo sayniska iyo habka ay "madaxa ugu jiraan ciidda" ee ku wajahan maamulka ururradooda iyo fayoobaanta rakaabka iyo shaqaalaha.
Dalxiis Ku Tiirsan
The burburka ba'an waa mid ka dhashay guuldaradii buuxda ee Kariibiyaanka si ay u kala duwanaato dhaq -dhaqaaqeeda dhaqaale iyo aragti myopic ee kheyraadkeeda. Tani waa mid ka mid ah meelaha ugu yar ee adduunka kala duwan iyadoo dalxiiskuna uu yahay 14 boqolkiiba GDP-ga sannadka 2019, waana kan ugu badan gobol kasta. Wadamada LAC waxay ka mid yihiin dhibaatooyinka ugu badan ee adduunka u nugul masiibooyinka dabiiciga ahna waxay la mid yihiin waxqabadyada maalin kasta halkii ay ka ahaan lahaayeen naxdin ama lama filaan. Waxa cusub, si kastaba ha noqotee, waa dhibka naxdinta leh iyo xawaaraha iyo adkeysiga uu coronavirus ku saameeyay aasaaska dhaqaale ee goobahan.
Markaan ka soo baxo habeyntii la xoojiyay, martigelinta, safarka, iyo howl wadeenada dalxiiska ee ka badbaaday aafada ugu xun ayaa hada waxaa haray howl aad u weyn oo ah in warshada laga naasnuujiyo oo laga fogeeyo taakuleynta nolosha iyo kalkaalinta caafimaad.
Sida qof kasta oo jirran - waxaa loo baahan yahay in la qaado tillaabooyin (inta badan tallaabooyinka dhallaanka), si looga gudbo cudurka loona gudbo caafimaad. Haddii bukaanku nasiib u yeesho, asxaabta, qoyska, iyo talo wanaagsan oo ay ka helaan khubarada Google ee khadka tooska ah bixiya waxay marin u noqon doonaan dib u soo kabashada. Bukaanku way dhici karaan oo dib-u-socon karaan dhowr jeer, laakiin niyad jab iyo go'aan qaadasho, way soo kabsan doonaan waxayna diyaar u yihiin dagaal.
Sida laga soo xigtay Bangiga Horumarinta Ameerika (IDB) Cudurka faafa ee COVID-19 horseeday hoos -u -dhac dhaqaale oo ugu xumaa Latin America iyo Kariibiyaanka muddo laba boqol oo sano ah. Marka laga gudbo dhibaatada dhaqaale waa saameynta burburka ee aafadu ku leedahay bulshada gobolka iyo nidaamyada caafimaadka. In kasta oo gobolku matalayo kaliya 8 boqolkiiba dadka adduunka haddana wuxuu soo sheegay boqolkiiba 28 dhammaan dhimashada (atlanticcouncil.org).
Xitaa ka hor masiibada, waxqabadka guud ee dhaqaalaha gobolka ayaa ahaa kii ugu xumaa adduunka oo lagu qiyaasay kaliya 0.1 boqolkiiba kobaca wax -soo -saarka guud (GDP) intii lagu jiray 2019. Intii u dhaxaysay 2013 iyo 2019, kobaca Latin America iyo Kariibiyaanka ayaa celcelis ahaan gaaray 0.8 boqolkiiba iyo gobolka waligeed ma awoodin inay horumariso dhaqaale waara.
Wadamadu inta badan way kala qaybsan yihiin marka la eego helitaanka badeecadaha dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay, oo ka bilaabma fursadaha dhaqaale iyo waxbarasho ee daryeelka caafimaadka iyo jawi nadiif ah / badbaado leh oo ay uga sii dartay heerarka sare ee xog la'aanta shaqaalaha, maalgashiga gaarka loo leeyahay oo hooseeya (16 boqolkiiba GDP), marka loo eego kuwa kale. gobollada, tanina waxay saameyn ku yeelaneysaa wax soo saar, hal-abuurnimo iyo shaqo abuur rasmi ah (cepal.org, 2020).
Laga soo bilaabo xiritaanka garoomada diyaaradaha iyo xayiraadaha safarka ee macaamiisha, imaatinka dalxiisayaasha Caribbean-ka ayaa hoos u dhacay 67 boqolkiiba sanadka 2020 marka loo eego xogta UN-ka, IMF waxay go’aamisay in joogitaanka hoteellada sanadlaha ah uu hoos u dhacay boqolkiiba 70, safarka markabka dalxiiskuna gebi ahaanba istaagay
In kasta oo barnaamijyada tallaalka iyo tartiib-tartiib loo yareynayo xannibaadaha socdaalka, soo kabashada Kaariibiyaanka ayaa aad u gaabis ah oo ku qasbeysa Sanduuqa Lacagta Adduunka (IMF) inay hoos u dhigto heerka kobaca 2021 ee laga filayo 4.0 illaa 2.4 boqolkiiba gobolka oo dhan. Waxaa jiray ugu yaraan 38,789,000 infekshanno la soo sheegay iyo 1,310,000 dhimasho la soo sheegay oo uu sababay coronavirus -ka cusub ee Latin America iyo Kariibiyaanka (graphics.reuters.com). 100-kii cudur ee ugu dambeeya ee laga soo sheego aduunka oo dhan, qiyaastii 26 ayaa laga soo sheegay wadamada Latin Amerika iyo Kariibiyaanka. Gobolku wuxuu hadda soo sheegayaa milyan malyan oo infekshan ah 8dii maalmoodba mar wuxuuna soo sheegay in kabadan 38,789,999 tan iyo markii uu cudurku bilaabmay.
Yaraynta dalxiisayaashu waxay ku qasabtay warshadaha inay yareeyaan shaqaalaynta - taas oo ah gobol dalxiisku u dhigmo 2.8 milyan oo shaqo (qiyaastii boqolkiiba 15 wadarta shaqaalaynta). Tani waa dhibaato dhaqaale oo halis ah. Iskusoo wada duuboo, Caribbean-ka ayaa lumiyay in kabadan 2 milyan oo shaqo sababo la xiriira faafida (Ururka Shaqaalaha Caalamiga), inbadan oo kamid ah waaxda dalxiiska.
Maaddaama waddamada LAC ay wajahayaan mowjado cusub oo coronavirus ah xilli olole tallaal oo gaabis ah, soo kabsashadu way adkaan doontaa. Guryihii waaweynaa waa la xiray: Dalka Dominican Republic, 400 qol oo heer sare ah Punta Cana Resort; Jamaica, Half Moon Hotel Jamaica (400); gudaha St. Kitts, oo ah 50-qol Ocean Terrace Inn.
Dhinaca kale Dalxiisyada Sandals oo ay weheliso Xeebaha Dalxiisyada Xeebaha ayaa sii waday xayeysiinta, waxay soo saareen nidaam u gaar ah oo tallaal ah iyo nabadgelyada dalxiiska iyo heerarka caafimaadka. Natiijadu waxay ahayd heer degganaan heer sare ah inta lagu gudajiray dhibaatada oo dhan, iyada oo ku saleysan kalsoonida macaamilka ee lagu horumariyey ololeyaal fidin dagaal ah.
Sandals iyo Xeebaha Dalxiisyada ayaa ballanqaaday fasax aan walwal lahayn waxayna awoodeen inay fuliyaan ballanqaadkan ilaa hadda.
Dalxiiska uma badna inuu dib u soo laabto ilaa gobolku xakameeyo fayraska. Waqtigan xaadirka ah, Ururka Caafimaadka Ameerika ee Pan American wuxuu u arkaa in cirifka uu ku jiro "dhexda ka dillaaca sii xumaanaysa," fayraskuna wuxuu ku sii socdaa jasiiradda Kariibiyaanka halkaas oo tirada kiisaska maalin walba ay kor u kacaan, iyo dawladaha Caribbean ee deymaha leh waxay haystaan ​​ilo yar oo ay dhaqaalahooda ku sii hayaan. .
Wasiirka Dalxiiska ee Jamaica, Edmund Barlett wuxuu ku eegay arrinta ballaadhan il caalami ah wuxuuna qaatay lahaanshaha dhibaatada. Waxay u ogolaatay Jamaica inay gacan ka geysato xalka waxayna ka dhigtay codka Caribbean-ka mid aad u sareeya oo cad. Jamaica waxay hoy u noqotay Xarunta Adkaysiga Dalxiiska Caalamiga iyo Xarunta Maareynta Dhibaatooyinka oo faracyo ku leh Malta, Nepal, Kenya, iyo sidoo kale dhowaan Saudi Arabia. Bartlett ayaa u sheegay eTurboNews, inuu ku faraxsan yahay dib u soo celinta lambarrada imanaya ee booqdayaasha hadda jira.
Luminta shaqo ee waaxda dalxiiska waxay saamayn ku yeelanaysaa gebi ahaanba dhalinyarada, haweenka, iyo shaqaalaha aqoonta yar sidaa darteedna waxay kordhisaa saboolnimada iyo sinnaan la'aanta. Kala duwanaansho la'aanta iyo joogtayn la'aanta ayaa sidoo kale soo bandhigaysa xiritaanka ganacsiga iyo musalafnimada ka dhex jirta hudheelada, meelaha dalxiisyada, iyo qaybaha kale ee la xidhiidha adeegyada dalxiiska (ie, makhaayadaha, tafaariiqda, dalxiisayaasha dalxiiska, darawallada tagaasida). Hoos u dhaca duullimaadka iyo khilaafka sii socda ee go / aan go'aan ka gaarin waaxda safarka, wada-hawlgalayaasha warshadaha ee ku tiirsan rakaabka safarka maraakiibta ayaan haysan wax ay ku soo ceshadaan haddii maraakiibta si joogto ah loo joojiyo ama dib loogu celiyo meelo kale.
Gobolka Kariibiyaanka ayaa inta badan ka jira deyn. In kasta oo bulshada lacagta adduunku furtay jeebkooda wadajirka ah si loo daboolo baahida loo qabo kharashaadka dadweynaha ee gobolka, haddana taageerada waxay ahayd seef laba af leh; Cadaadiska waqtiga dhow waa la yareeyay laakiin dalal badan ayaa hada wajahaya caqabad madaama ay sii kordheyso hoos u dhaca maaliyadeed iyo amaahdu oo ay sii adkaaneyso oo dhibaatooyinka ay sii socdaan.